घुम्दै फिर्दै रुम्झाटार – राम लामा अविनाशी-Brtnepal.com
हाल अमेरिकाको एनआरएनको चुनावले सरगर्मी बढाएको छ । केही मिनट पछि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन ।
एक दिन बिहान करिब १० बजे तिर जर्मनको फ्रान्क्फटबाट एक हितैशी मित्रको फोन आयो । उहाँ एनआरएन आईसिसिको युरोप स्तरिय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । “होइन हो, यो गैरी जोशी भन्ने को हो” ? मैले प्रश्नको आशय बुझी हालें र कुरोलाई नलम्ब्याएर उहाँलाई सही सूचना दिन तिर लागें । मिडियामा सार्वजनिक भएका अध्यक्ष शेष घले, महासचिव र अम्बिका अधिकारीको चिट्ठी फटा फट पठाइदिए । ‘उहा एक मजबुत अवस्थाका अध्यक्षका उमेदबार हुनुहुन्छ तर मैले उहाँलाई व्यक्तिगत तवरले नचिनेको कुरा उल्लेख गरेँ । हुनपनि, केही दिन अगाडि एनआरएनको चुनावको मिति घोषणा हुन ढिलाइ हुनुमा जिम्मेवारको भनी लेख लेख्ने क्रममा अध्यक्षका सबै उमेद्बार लगायत चुनाव आयुक्त बन्दिता दाहाललाई सम्पर्कको प्रयास गरेको थिएँ ।
चुनाव आयुक्त अदालतमा सुनुवाइमा ब्यस्तताको कारणले फोन सम्पर्कमा आउन नसकेको कारण देखाउँदै भोलिपल्ट मेसेज पठाउनु भएको थियो । तर अरू सबै अध्यक्षका उमेद्बारहरुले आफ्नो राय खुलेर राख्नु भएको भए पनि उनी गौरी जोशीले भने अहिले सम्म पनि सम्पर्क गर्नु भएन ।अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ह्वाईट हाउसमा बिदाइ भाषण गर्नु भएको थियो । उक्त प्रत्यक्ष प्रसारणमा मैले नेपाल जस्तो अबिकसित देशमा बनेका ६६ क्याटगरीका तयारी पोशाकका सामानहरुलाई अमेरिकी बजारमा भित्र्याउनलाई भन्सार छुटको सुविधाको निर्णय गरिदिनु भएकोले मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेको थिएँ । सम्बोधनको कार्यक्रम सिद्धिए लगत्तै मेरो त्यो कमेण्टको प्रतिक्रिया आएको थियो ।
तर, एउटा नेपालीले फोन तथा म्यासेजको बेवास्ता गरेको अवस्थाले उहाँको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्ने सक्ने कुरामा कमी भएको कुराको लख काटेको थिए । हुनपनि पटक-पटक विभिन्न अवस्थामा आफ्नो बच्पना देखाउँदै अन्तत: साइड लाग्नु भयो । राम्रो भयो या नराम्रो यो प्रति मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्न चाहदिन । समिकरण, ध्रुबिकरण तथा सम्झौता आदि बजारिया हल्लाको पछि मलाई लाग्नु पनि छैन । तर उहाँ प्रति भर परेका सबै खाले आसेपासे देखी प्यानलमा बसी जित सुनिश्चित ठानेका अन्य पदका प्रत्यासीहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।
कसैका लागि दुहुनो गाई फुत्केको छ भने उमेद्बारलाई आफ्नो जितको सु-निश्चिततामा धरमर लाग्न थालेको छ । सम्झौता र समिकरणले काम गर्ला या नगर्ला समयले नै बताउने छ, तर उहा चर्चाको शिखरमा भने पुग्नु भएको छ ।
अब पूर्व कार्यसमिति सँगै काम गरेका आफ्नै उपाध्यक्षहरुसँग लाज नमानीकन डा. पौडेल भिड्नु भएको छ । विगतका पेण्डिङ्ग कामहरू फत्ते गर्नका लागि आफ्नो उम्मेद्बारीको जरुरत परेको हो भन्नुहुन्छ उहाँ । तर, विगतका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउन र संस्थागत सुधारका लागि आफ्नो उम्मेदवारी हो भन्नु भएको छ, अरू प्रतिद्वन्धी सबै अध्यक्षका उमेद्बारहरुले । उहाँहरूले यस्तो कुरा गरिरहँदा अध्यक्ष केशव पौडेलनै सुधारका बाधक हुन भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ ।
गत चुनावमा अध्यक्षको पदमा जिते लगत्तै अदालत धाउनु पर्ने बाध्यतामा फसें डा. पौडेल । फर्जी मतको कारण देखाएर मुद्दा हालेको खबरले अरू जस्तो म पनि खुसी भएको थिएँ । हत्कडी लगाएर जेल चलान गरेको समाचारको प्रतीक्षामा थिए धेरै जसो । तर त्यसो हुन सकेन । हत्कडीको सट्टा सेतो कोट लगाएर गलामा स्तेथोस्कोप (Stethoscope) झुण्ड्याएर नेपालमा भूकम्प पीडितको स्वास्थ परीक्षण गर्दै औषधी बांड्दै हिंडेको एनआरएन अमेरिका टिमको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा भेटियो ।
एनआरएन अमेरिका अरू देशको भन्दा विशिष्ट बन्नु पर्दछ । विश्वको व्यापारिक केन्द्र अमेरिकामा हाम्रो जस्तो गरिब देश र असफल सरकार भएकोले एनआरएन अमेरिका दरिलो र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ । नेपाल र अमेरिकाको व्यापारको सम्बन्धको विकास गर्न भनी च्याम्बर अफ कमर्स पनि स्थापना भएका छन् । राम्रो लक्षण हो । तर यस्ता संस्थाहरूको अमेरिकी सरकारको नीति नियम बनाउने तह सम्म पहुच हुन सकेन । पुगे पनि त्यो स्तरमा प्रभावकारी प्रस्तुतिको कलाको कमी भयो । यी यस्ता संस्थाहरूको दूर दर्षितावालासंग सहकार्य गर्दै यसको नेतृत्व एनआरएनका अध्यक्षले गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।
नेपालको विकासका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका एनआरएनले निभाउन जरुरी छ । त्यसको लागि अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन आवश्यक छ। मुख्यत: शैक्षिक योग्यता अपरिहार्य छ । अमेरिकी सरकारसंगको भेटमा हुने बार्तलापमा भाषाको स्तरियताले ठुलो भूमिका खेल्न सक्दछ । मैले यसपालिका अब बाँकी रहेका सबै अध्यक्षका उमेद्बारसँग बार्तलाप गरी सकेको छु । सबै त्यत्तिकै शिक्षित र सक्षम पनि हुनुहुन्छ र देशको परिस्थितीसंग, सुपरिचित पनि । जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने क्षमता सबैमा छ । यत्तिका सक्षम व्यक्तिहरूले एनआरएनमा चासो देखाउनु खुसीको कुरा पनि हो ।
सबै स्वच्छ छविका हुनुहुन्छ । तर डा. केशव पौडेल आरोपित उमेद्बार हुन । आरोप लाग्दा लाग्दै पनि उहाँको फेरी अध्यक्षको पदको उम्मेद्बारीमा विरोध आएन । हामी लाटा सोझा नेपाली समाजमा अन्यौल छायो । हत्कडी लगाएर जेल जाने दिन कुरेर बसेकाले फेरी अध्यक्षको उम्मेद्बारीमा नाम भेटियो । उहाँको विरोधमा नेपाली काङ्रेसको अर्को चोइटोबाट अनेक तिकडमबाजी भइरहे । बाटोको दर्शन ढुङ्गा उचालेर चौतारामा राखेर फुलपाती चढाएर देउता माने जसरी अर्को पक्षले अपरिचितलाई काङ्ग्रेसी मानी सिरमा राखे । तैपनि निडर र स्व-स्फुर्त रूपमा आफ्नो प्रचार प्रसारमा लागिरहे डा. पौडेल । कुनै कार्यक्रममा पनि र कसैले पनि उनले गरेको भनिएको फर्जी कामको खुलेर विरोध गरेको पाईएन । जसले गर्दा चुनावमा हार स्वीकार गर्न नसकेको बितिश्णाको उपज अदालतको ढोकामा ठोक्किएको रहेछ भन्ने कुरा प्रस्टियो ।
विगतमा गरेका गल्तीले अनुभव बटुलेका डा. पौडेलले गल्तीको महसुस पनि गरेकै हुनुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरु, जसले नेपालको समग्र विकासका अवरोध र समाधानका उपायहरुका बाटा देखेकाहरुको निर्देशनमा हिँड्न सक्नुभयो भने डा. पौडेलको शैक्षिक योज्ञताको फाइदा एन आर एन अमेरिकाले लिन सक्दछ । माहौल उहाँकै पक्षमा बनिरहेको र बढिरहेको यो सुगम अवस्थामा डा. पौडेल फेरी सफललाका लागि ‘घुम्दै-फिर्दै रुम्जाटार’ पुग्ने सम्भावनालाई शुभकामना ।
Published on September 3, 2017 at 4:33 am